New caps Klaasen, Jonker and Dala
Abadlali abasha u-Klaasen, u-Jonker no-Dala babaliwe kwiqembu lama-Proteas lama-T20; iqembu le-SA A lizodlala ne-Australia
Namhlanje i-Cricket South Africa (CSA) ibale oshayela ama-Warriors u-Christian Jonker nababili bama-Multiply Titans, ophosa ngokushesha u-Junior Dala novimbayo u-Heinrich Klaasen njengabadlali abasha kwiqembu lama-Standard Bank Proteas kwimidlalo emithathu ye-KFC T20 International Series bedlala ne-India ngasekupheleni kwalenyanga.
u-JP Duminy umenyezelwe njengokapteni njengoba engekho u-Faf du Plessis elimele.
“Njengoba i-Sunfoil Test Series bedlala ne-Australia iqala ezinsukwini ezinhlanu emuva kokuphela kwe-T20 Series kubalulekile kithini ukuphumuza abanye babadlali abadlale cishe kuyona yonke imidlalo yethu okwamanje kwihlobo,” kuphawula i- CSA National Selection Panel Convener u-Linda Zondi.
“Lapha kubalwa u-Hashim Amla no-Aiden Markram kubadlali abashayayo kanye nabaningi abaphosayo. U-AB de Villiers uphuthelwe ikhilikithi eningi kulelihlobo ngakho uzodlala kwi-T20 Series.”
“Sikhethe ukuphumuza u-Imran Tahir. Osahamba phambili kithina kumdlali ophosa nge-spin kwizona zombili izinhlobo zekhilikithi zebhola elimhlophe,” esho echaza u-Zondi, kodwa kumele sinike u-Tabraiz Shamsi no-Aaron Phangiso isikhathi sokudlala. i-ICC World Twenty20 iseduzane ngo-2020 ngakho kubalulekile ukuthi siyakha futhi sihlola esinakho kuyela kumqhudelwano.
“u-Christiaan Jonker ibeyiqeda kahle imidlalo kwi-domestic T20 cricket kuma-season adlulile futhi ukukhethwa kwakhe, kanye nalokho kwa-Dala, kunika abadlali abadlale kahle kwikhilikithi yama-franchise ithuba lokukhombisa ukuthi bangadlala kwizinga eliphezulu. Umdlalo ka-Heinrich Klaasen odlulile uyazikhulumela.”
“u-Reeza Hendricks uthola elinye ithuba ngesizathu esifanayo, njengoba athola ama-runs amaningi kunabo bonke kwi-RAM SLAM Challenge kule-season.”
Abakhethayo baphinde bamemezela iqembu le-South Africa A elizodlala ne-Australia umdlalo ozodlalelwa e-Sahara Park Willowmoore kusukela ngo-February 22 kuyela ku-24.
u-Khaya Zondo uzoba ukapteni weqembu bese ababili abadlalela ama-World Sports Betting Cape Cobras u-Pieter Malan no-Zubrayr Hamza nokwenza konke kuma-Hollywoodbets Dolphins u-Senuran Muthusamy bakhethwe okokuqala kulelizinga.
“Njengoba ikhilikithi yama-franchise ingekho kulelisonto kunika elinye iqembu labadlali ithuba elihle ukukhombisa ukuthi bangenzani bedlala neqembu elikhulu,” esho evala u-Zondi.
Ama-Proteas ashintshela kubomvana kumdlalo okumele bawunqobe Ama-Proteas women azimisele ngokubuya u-Kohli nama-wrist spinners bayaqhubeka nokucindezela ama-Proteas Mandhana no-Yadav banqobela i-India women i-ODI series u-Mandhana, u-Goswami no-Pandey babeka i-India ngaphambili ngo-1-0 bedlala ne-Proteas women u-De Kock uphume amasonto amabili kuyela kwamane elimele isihlakala u-Van Niekerk ulindele ukudlala ekhaya Ama-spinners e-India akhipha ama-Proteas babahlule kakhulu u-Van Tonder ungaphambili kwabe-SA abathathu kwi-ICC U19 World Cup Select XI u-Markram ufakwe njengokapteni kuze kuphele i-ODI series uKohli uhole umjaho we-India ngekhulu elihle